China Kofi muchina zvikamu vagadziri uye vanotengesa | Chapman
✭ Ichi chikamu chepurasitiki ndicho chikamu chikuru chekapisi kofi muchina, uye ndicho chikamu chepakati checapsule kofi muchina.
✭Mashoko anoshandiswa pachikamu chepurasitiki ichi PA66 + 45GF, uye kune zvikamu zvitatu zvepurasitiki zvinoda kuunganidzwa nechikamu chepurasitiki ichi. Chikamu chinotsvedza chemuchina uye nekukatanurwa kwekapisi yekofi hazviparadzane kubva pachikamu chepurasitiki ichi.
✭ Zvakanakira zvacho hazvisi nyore kuumbika, kugadzikana kwakanaka, kunyatsoita chokwadi, kuona kuti muchina wekofi wakadzikama panguva yebasa uye unoderedza ruzha.
✭Foroma iyi yekugadzirwa kwekambani yedu, iyo inonyanya kupa epurasitiki zvikamu zvevashandisi vedu vekofi. Iko kugona kwekugadzira kweiyi seti yekuumbwa ndeye 800 pazuva.
Muforoma NO. CPM-150229
Zvinyorwa zvePurasitiki PA66 + 45GF
Chikamu uremu 120.61g
Chikamu chemazana 155 * 85 * 52 mm
Saizi yekukura 450 * 400 * 421mm
Chikamu Zita Kofi muchina zvikamu
Mumhanyi kunongedzera gedhi
Lead Nguva Mazuva makumi mashanu
Muforoma Kutenderera Nguva: 38's
Iyo yakanakisa pod kofi michina inoreva kuti haufanire kutenderedza nekutenga kofi bhinzi uye nekukuya. Ehe, izvo hazvina mubvunzo kune vamwe maererano nemubhadharo uye marara, saka hatingadeidze kunyange yakanakisa kapisi kofi inogadzira iyo yakanaka kofi inogadzira, asi kune rimwe divi, kapisi kapisi iri nyore zviri nyore. Woah, yakanaka alliteration.
Kofi pod michina zvakare inoburitsa mhedzisiro mhedzisiro inozivikanwa kuti yakaoma kuwana uchishandisa yakajairwa espresso michina uye mazhinji bhinzi-kusvika-mukombe mamodheru. Nemuchina wecapsule iwe unongoregedza mupodhi, rova ​​bhatani uye panobuda rwizi rweakasimba crema-yakawedzera goridhe dema yega yega sepunchy seyekupedzisira.
Ichi chikamu chepurasitiki chikamu chakakosha kwazvo chekapisi yemuchina wemuchina, unotakura zvese zvinoitwa nemuchina wekofi. Yakatamba yakanyanya kukosha basa rekugadzikana uye kutungamirwa.
Pashure: Fan rekumashure kavha
Zvadaro: Diki chaiyo servo yekufambisa giya kuvhara